NST: शुक्रवार, ०४:०३ | ८ मंसिर, २०७४ | 24th November 2017
काठमाडौ । भारतकालागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले साथीहरुको इच्छा अनुसार राजनीतिमा फर्कने सोँच बनाएका छन् । लामो समय देखि नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरेर केन्द्रिय समिति र मन्त्री समेत भएका उपाध्याय २ बर्ष देखि कुटनीतिक पदमा आसिन छन् । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतकालागि राजदूत नियुक्त गरेका उपाध्यायलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पुनः कुटनीतिक जिम्मेवारी दिएपछि राजदूत भएका उपाध्यायले अब हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनकालागि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने संकेत नेपालवाणी नेटवर्कको कार्याक्रम वाणी वहसमा व्यक्त गरेका हुन् । वाणी वहसकालागि राजेन्द्र वाणियाँले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
अहिलेको अवस्थामा तपाईको नेपाल वसाई किन र के कालागि ?
म कुटनीतिक मान्छे हो । कुटनीतिक मर्यादामा रहेकाले सरकारी कामकै सिलसिलामा नेपाल आएको हुँ । आजै म तपाईसँग कुरा गरेपछि नयाँ दिल्ली फर्कदैछु । यहाँको बसाईका क्रममा मैले धेरै किसिमका पारस्परिक कुटनीतिक प्रयासका कुराहरु सरकारसँग गरेको छु ।
खास गरेर नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वाढी तथा डुवान समस्या समाधानकालागि दीर्घकालिनरुपमा पानीको समस्या समधान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो, त्यसैको छलफल पनि गर्न आएको हुँ ।
अहिले एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर केही हुँदैन । नेपाल र भारतमा डुवानको समस्या उस्तै छ । नेपालको तराई र भारतको खास गरेर उत्तर प्रदेश र विहार यसबाट पीडितनै छ । त्यसको समाधानकालागि हामीले गर्ने प्रयास र विगतका कमीकमजोरीहरु सल्टाउने विषयमा कुराहरु अघि बढेका थिए, त्यसैको फ्लोअपकालागि आएको हुँ ।
भारतले बनाएको संरचनाका कारणले नेपाल डुबानमा परेको आरोप भारतलाई लाग्छ छ । यो कति सत्य हो ?
म तराईको व्यक्ति हुँ । कपिलवस्तुको वासिन्दा भएकाले पनि मैले वाढीको कुरा बुझ्छु । तर यसलाई जवरजस्ती दोष थुपारेर भन्दा पनि कुटनीटिक पहलबाट शान्तर मर्यादित परिणाम निकाल्ने किसिमले अघि बढ्नु पर्छ ।
नेपालको प्रयास चाहीँ अब टेबुलमा आमुने सामुने बसेर प्रामाणिक रुपमा कुरा गरेर सुल्झाउने तिर जानु पर्छ भन्ने कुरा मैले पनि धेरै पटक भन्ने गरेको छु । कुरा गरेपछि मात्रै त्यसले परिणाम दिन्छ ।
नेपालको प्रयास चाहीँ अब टेबुलमा आमुने सामुने बसेर प्रामाणिक रुपमा कुरा गरेर सुल्झाउने तिर जानु पर्छ भन्ने कुरा मैले पनि धेरै पटक भन्ने गरेको छु । कुरा गरेपछि मात्रै त्यसले परिणाम दिन्छ । जस्तै पहिलेका कुराहरु भन्ने हो भने खास गरेर जति पनि कोशी–गण्डक लगाएतका सम्झौताहरुमा नेपालले जति पाउनु पर्ने बिजुली पानी पाउन सकेन भन्ने गुनासाहरु थिए र ती बाहिर बाहिर पनि धेरै आए । तर अहिले हामीले एक पटक कुटनीतिक पहलहरु गरेका छौँ । चर्चामा रहेका विषयहरुमा हामीले भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । हामीले भनेका छौँ, गण्डकको समस्या समाधान कसरी हुन्छ, अरुण तेस्रोको कुरा, पञ्चेश्वर परियोजनाको कुराहरु गर्दै आएका छौँ ।
भारतले जिम्मा लिएका नेपालका राष्ट्रिय गौरबका मानिने आयोजनाहरु र हिजो सहमति र सम्झौता भैसकेर बन्न बाँकी रहेका आयोजना एका तिर छन । हरेक बाँधका नाममा नेपालमा राष्ट्रबाद्को राजनीति हुन्छ । यो खालि राजनीतिको लागि उठाँइएको विषय हो कि नेपाल ठगिएकै छ ?
मैले भारतमा के भन्ने गरेको छु भने अहिले हामी चुनावको मुखमा छौ । चुनाबमा भोट घटाउन बढाउनकालागि सिमित राजनीतिक दलले मतदाता प्रभाव पार्ने खेल मात्रै हो । यो विषयमा बहस गर्न जरुरी छैन ।
तर दुई मुलुक वीचको सम्बन्धलाई चुनावमा जोडेर हेरियो भने राम्रो भएननी ?
कुनै पनि नेता कुनै पनि पार्टी भारतको विरोधी नेपालमा छैन । बस्तुगत आधारमा दुबै देशको सम्बन्धलाई अगाडी बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो र त्यही प्रयासमा म छु । यो खास गरेर भारतमा नेपालकोस सार्वभौम सात्ता सम्पन्न देश भएकाले यहाँको सहमति बेगर अन्तराष्ट्रिय हाम्रा जति पनि सन्धि संझौताहरु हुन्छन् त्यसको परिधी भन्दा बाहिर बनेका जति पनि संरचानाहरु त्यसको चाहिँ एक चोटि ‘रिभ्यू’ गर्नु पर्दछ । संरचनाहरु बने र नेपालको क्षेत्र डुबानहुनु यो राम्रो बिषय होइन ।
हुनपर्ने विषय के त ?
हुनपर्छ के भने पानीको प्रबद्र्धन भनको शिर देखि लिएर निस्काशन सम्मको कुरा आउँछ । अहिले भारतमा ठूला ठूला नदीको सफाइको योजनाहरु बनाइएका छन् । त्यसैगरी पानीबाट सिंचाई देखि उर्जाको काम गर्नु पर्छ । वाढीको जोखिमबाट जोगिनकालागि पूर्व सूचना दिने प्रविधिहरुको प्रयोग गर्न सकियो भने त्यसको जोखिम पनि कम हुन्छ ।
हुनपर्छ के भने पानीको प्रबद्र्धन भनको शिर देखि लिएर निस्काशन सम्मको कुरा आउँछ । अहिले भारतमा ठूला ठूला नदीको सफाइको योजनाहरु बनाइएका छन् ।
अहिले संयोग कस्तो परेको छ भने, अहिले विहारमा पनि खास गरि भारतीय जनता पार्टी (विजेपी) को एक मना जस्तै संयुक्त सरकार छ । उत्तर प्रदेशमा पनि एक मना जस्तो छ । त्यहाँ पनि त्यतिकै वाढी र डुवानको समस्या समाधानकालागि दबाब परेको छ । नेपालसंगको सम्बन्धमा सुधार ल्याएर पानीको समस्या एकमुष्ट रुपमा प्याकेजमा समाधान खोज्नु पर्ने बेला आएको छ ।
भारत र नेपालको बीचमा जो सिमा क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत र साधनमा जुन प्रकारका बाडफाँड छ त्याहाँनिर नीतिगत समस्या हो कि नियतिको समस्या हो कि सयंन्त्रको समस्या हो ?
नेपालको जे जति नलेज, इजिडम एक्सपेटिड, एक्सप्रिएन्स, जे जति छन त्यो कुराहरुलाई एक ठाउँमा राखेर राष्ट्रको हितमा सदुपयोग गर्ने हो । प्रयास गर्ने हो राम्रो कुरा के छ भन्दा अहिले नेपालमा पनि ‘पानी बगेको होईन डलर बग्यो’ भन्नेमा हामी पुगि सकेका छौँ । तर त्यो पानीलाई डलर बनाउने प्रविधीमा अझै पनि एक मत छैनैँ ।
डलर बनाउने भन्यो भने धेरै नकारात्मक टिका टिप्पणी पनि हुन्छ । त्यसैले यो विषयमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय नियम कानुनहरु छन त्यसलाई ध्यायनमा राखेर भारत सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गरेका छौँ । फलस्वरुप भारत सरकार सहमतिमा आएको छ । नेपालले अब किन ल्याण्ड लक मात्रै हुने । प्रविधि प्रयोग गरेर नेपालले जलमार्ग किन प्रयोग नगर्ने, जलमार्ग अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई आवश्यकता र प्राथमिकता पनि हो । त्यसैगरी नेपाल भन्दा भारत ठूलो छ । यहाँ चाहिने भनेको थोरै पानी हो । वढी भएको पानी त भारतलेनै उपभोग गर्ने हो नी ।
नेपालबाट भारतको प्राथमिकताको विषय भनेको विजुली होकी डुवानको समाधान हो ?
डुवानको समस्या समाधान एउटा विषय हो भने । भारत पानीको समूचित प्रयोगमा विशेष ध्यान दिन तयार छ । त्यसकलागि उसले विश्व वैंकका विज्ञलाई राखेर छलफल गर्न तयार रहेको जवाफ पनि दिएको छ । यो विषयमा एक दुई पटक छलफल भएको पनि छ । तर अहिले नेपालमा चुनावी वातावरण अघि बढि रहेकाले यी र यस्ता विषयहरुमा त्यति धेरै छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । यो विषय चुनाव पछि सहमतिमा पुग्न सजिलो हुन्छ ।
आज पो त्यो कुरा छ । हिजोको दिनहरुलाई पनि हेर्नु परेन ?
मैले प्रष्ट भनेको छु छलफल गरि सहमतिमा पुग्ने वातावारण बनाउ भनेर । यो प्रयास गर्दा गर्दै भारत अहिले धेरै कुरामा सहमत छ । त्यसलाई अब अब निर्वाचित सरकारलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुने छ । भारतमा त सजिलो पनि छ एउटै पार्टीको बालियो सरकार भएकाले उनीहरुले आँटेपछि निर्णय गर्न सजिलो छ तर राजनीतिक कारणले नेपाललाई अप्ठेरो छ ।
नेपालमा राजनीतिक दलहरुका विचमा खिचडी अवस्था छ त्यसले समस्या हाम्रो हो त ?
भारत नेपालमा शान्ति र आर्थिक समृद्धिको वाटोमा अघि बढोस भन्ने चाहन्छ । तर यहाँका नेताहरु पदमा रहँदा र नरहँदा दुई थरी कुराहरु गर्ने भएकाले भारतले केही असजिलो मानेको पक्कै हो । यस विषयमा मैले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई पटक पटक भन्ने गरेको छु सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिका विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ ।
उच्च तहको भ्रमणमा त चर्का चर्का कुराहरु हुन्छन त ?
नेपालका सम्पूर्ण विज्ञहरुलाई तपाई मार्फत नै अनुरोध गर्छु की । अब भारत सरकार पहिलेको जस्तो अडानमा छैन । हामीले एक खालको दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्यौँ भने भारत पनि सहमतिमा आउँछ । यो गर्दा भारत र नेपालको पीडा एकै पटक समाधान हुन्छ ।
भारत नेपालमा शान्ति र आर्थिक समृद्धिको वाटोमा अघि बढोस भन्ने चाहन्छ । तर यहाँका नेताहरु पदमा रहँदा र नरहँदा दुई थरी कुराहरु गर्ने भएकाले भारतले केही असजिलो मानेको पक्कै हो ।
भारत नेपाल तर्फबाट सुरक्षाको विषयमा कति बढी चिन्तित छ त ?
शान्त नेपाल स्थिर नेपाल आर्थिक समृद्धिमा अगाढि बढेको नेपाल जतिको भरपर्दो भारतकालागि अर्को जवाफ हुँदैन ।
नेपालमा जति अस्थिरता भयो त्यती नै बढी पीडा भारतलाई पनि हुन्छ । उतरको छिमेकीलाई त त्यती धेरै तनाव छैन, किन भने उत्तरमा हिमालय छ त्यता सुरक्षा चुनौति देखिदैन ।
भारतले नेपालको एयरपोर्टमा एयर मार्सल राख्ने कुरा गर्छ त ?
मत पर्यटन मन्त्री पनि भएको मान्छे । यसमा हामीले ‘नन्इस्यूलाई पनि इस्यू’ बनाएका छौँ । ‘आइकाओ’को नियम अनुसार जे हुन्छ त्ही हुने हो । यदी हामीले अन्तराष्ट्रिय उडान गर्छौ भने त्यो सुविधा जे हो त्यो अनुसारले काम गर्ने हो ।
भारतले आयोजनाहरु कव्जा गर्ने र नबनाउने यो कुरा कहिले उठाउनु भा छ त्यहाँ ?
धेरै पटक घनीभूत रुपमा उठाएको छु । जस्तै अरुण तेस्रो अगाढि बढ्यो । अरुण तेस्रो समयमा बनेको भए लाभ हानी के हुन्थ्यो त्यता तिर नजाउँ । तर आज बन्दा खेरी यसले नेपाललाई लाभ छ भने कुरामा हामी सहमत भएरनै भारतको सरकारी कम्पनी सँग काम गर्दै छ । त्यसमा कुनै झमेला छैन । झमेला हाम्रो पक्षमा थियो । पिडिएलाई कार्यन्वयन नर्गन हाम्रो बनका वातावरणका समास्या थिए ।
आबश्यकता अनुसार साथीहरुको भावना अनुसार आउनुपर्ने हो भने राजीनामा स्वीकृत गराएर आउँछु ।
वर्तमान सरकारले ती झमेलाहरु हटाएपछि भारत सरकामा पनि अलिकति विश्वास बढेको छ । अब नेपालमा काम हुन्छ कि भनेर । नत्र भने नेपालमा दौड भन्ने हात र खुट्टा बाधदिने अनि दौडेन भनेर आरोप लागाउने चलन थियो । त्यसरी को दौड्न सक्छ त्यो विषय समाधान भएको छ । अब ‘सतलज’ अगाडि बढछ । हामीले यहाँ बातावरण बनाउने हो भने छिटो भन्दा छिटो शिलान्यासको लागि भारतीय प्रधान्मन्त्री नरेन्द्र मोदी आफै पनि सयुंक्त शिलान्यासका लागि नेपाल आउने इच्छा देखाउनु भएको छ ।
हामीले ‘नन्इस्यूलाई पनि इस्यू’ बनाएका छौँ । ‘आइकाओ’को नियम अनुसार जे हुन्छ त्यही हुने हो
जिएमआरलाई तपाईले भनेको कुरा ठिक हो । भारत सरकारले मसँग भनेको छ सक्नुहु्न्छ आर्थिक कोलोजर गर सक्दैनौ भने सरकारलाई भन । बरु भारतीय कम्पनिले तिम्रो जे जति खर्च भएको छ त्यो दिएर पनि समयमै पुरा गर्न चाहन्छ्ु भनेको छ । अहिले भारतमा हेर्नुहोस कुनैपनि पुर्वाधारका योजनाक कुनैपनि जल स्रोतका योजना भनेको समयमा भनेको लागतमा हुन्छन । पहिले हामिकहाँ जस्तै भद्रगोल थियो ।
तपाई विश्वस्त हुनु हुन्छ ?
भारतमा भएको छ भने नेपालमा किन नहुने । नेपालको वातावरण हामीले बनाउनु हो नि ।
भारतमा जुन गतिमा काम हुन्छ त्यो गतिमा नेपालमा काम गर्छ त भारतले ?
एकदम छ हेर्नुस् । हामी कुनैपनि कम्पनीलाई अविश्वास नगरौ न । तर जिम्मा दिनु भन्दा अघि त्यसका सबै कुरा हामीेले निणर्य गर्नुभन्दा अगाडि छलफल गरौ । सानो उदाहरण हेराँै आइओसी र एनओसीको बीचमा पहिलेको सम्झौता र अहिलेको सम्झौता हेर्नुहोस त । धेरै फरक छ । अहिले चाहेर पनि कसैले बदमासी गर्न सक्दैन । हाँमीले आँखा चिम्लेर सहि गर्ने पछि गएर गालि गर्ने पछुताउने यस्ले हामीलाईनै कहाँ पुराउला र ? त्यो भएकाले अहिले समय बदलिएको छ । यसबेला हामीले राष्ट्रलाई फाईदा हुने किसिमको साकारात्मक साँेचको विकाश गर्न जरुरी छ ।
नेपालको संविधानको बारेमा भारत सधै किचलो गर्छ मैले भने अनुसारको संविधान लेखिदेउ भन्छ, उसको आफनै संविधान चाहि बिट्रिसहरुले बनाएर छोडेको हो, त्यहि संविधानका कारण भारत टुक्रिने हालतमा पुग्यो त्यो कुरा भारतले नबुझेको हो र ?
कहिलेकाही हामी हाम्रो मनमा अनेक किसिमका भावनाहरु आउछन । कुनै अन्तरङग आए भने त्यसमा हामी बहकिने की सम्हालिने ? त्यसकारण विगतका कुरा अब विर्सौँ । नेपालमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ । अब अरु चुनाव पनि हुदैँछन । मेरो भारत जाने उद्देश्य संविधानको सर्व स्वीकार्यता बढाउनु हो । सबै पार्टीहरुले चुनावमा भाग लिएका छन् । हामी ‘पोजेटिभलि’ हेरौ न ।
तपाईले अहिले सम्म तीन ओटा प्रधानमन्त्री भोगि सक्नु भयो नी त ? तर भारत यसो चाहिँ भन्दैननी नेपालको संंविधानको विषयमा हाम्रो कुनै पनि हस्तक्षप छैन शुभ्रमणिम जय शंकरलाई जसरी फकाई दियो त्यसमा पनि हाम्रो चित्त दुखाई छैन । संविधान तिम्रो हो तिमी जे गर्छौ गर त भन्दैन तपाईले त्यो गराउन नसक्या हो कि ?
जसरी अरु मित्र राष्ट्रहरुको सहयोग छ सद्भाव छ । एउटा भनाई छ नी मानिसको भावना शब्दलाई जता ढल्कायो त्यतै ढल्किन्छ । हामी सकारात्क हुने कि नकारात्मक हुने ? हिजोको कुरा विर्सनै पर्छ जस्तै अमेरीकाले बम खसालेको थियो भनेर जापान र कोरीयाले इगो लिएर बसेको भए जापान र कोरिया बन्ने थिए त ?
नेपालमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ । अब अरु चुनाव पनि हुदैँछन । मेरो भारत जाने उद्देश्य संविधानको सर्व स्वीकार्यता बढाउनु हो । सबै पार्टीहरुले चुनावमा भाग लिएका छन् । हामी ‘पोजेटिभलि’ हेरौ न ।
हामि बिर्सौला तर भारतले बिर्सीयो की विर्सिएन ?
विर्सेर त नेपालको चुनावमा भारतले सहयोग र सद्भाव बाहेक अरु कुरा गरेन नी ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सायद वान टु वान भेट वार्तामा त्यो कुरा उठ्यो होला त बाध्य भएर सके सम्म संसोधन गर्छु भन्नु भयो होला नि ?
कुटनीतिमा विरोध भएन भने हामीले त्यसलाई समर्थन मान्नु पर्छ । समर्थन भनेर कसैले भनी राख्न जरुरी छैन । पूर्विय दर्शनमा पनि ‘मौनम सहमति लक्ष्णम’ भन्छौ नी । मैले भने नी जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले देशकै भलो गर्छु भनेर हिँडेका हुन्छन् र गर्छन पनि ।
हामीले परराष्ट्रको नीतिका बारेमा सुरक्षा नितीका बारेमा अलिकति प्यारामीटर बनाएर नजाने हो भने नकरात्मक ग¥यो भने त्यसले राष्ट्रलाई फाईदा हुदैन् । ईण्डिया फाउण्डेशनको कार्यक्रममा एक जना मन्त्रीले अफ फ्रन्ट केहि कुरा झिक्नु भयो । उहाँले जवाफ दिनु भयो । प्रधानमन्त्रीले तत्कालै त्यसरी जवाफ दिन पर्दैन थियो । तर के भने देशको अहित हुने कुरा सोच्यो गर्यो भन्ने हामी कहाँ चलन छ नी, त्यसो नगरौँ ।
अब तपाई यसो भन्न सक्नु हुन्छ अब भारत नेपालको संविधानको विषयमा खासै नकारात्मक टिपणी गर्ने र चासोँ राख्ने काम गर्दौन भनेर ?
पटककै छैन । देश भित्रको समस्याको समाधान त हामीले गर्ने हो नी ।
संविधानको विषयमा देखिएको जुन प्रकारको अन्यमनस्क अवस्था छ भनिन्थ्यो । त्यो चाहिँ टुङ्गियो ?
अरुको चाहि छैन तर देशको भित्रको समस्या त आउछ नी । संविधान त गतिशिल दस्ताबेज हो ।
संविधानको धारा र प्रवधान हेरेर दिल्ली नाक खुम्च्याउदैन ?
कसैले नी नाक खुम्च्याउदैन । र खुम्च्याउन पनि जरुरी छैन ।
चीन र भारतबीच दोक्लन विवादमा भारतको पक्षमा बोल्न नेपाललाई दवाब आयो भन्ने कुरा छ ?
पटक्कै दबाब आएको छै । यो विषयमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री र मैले पनि बोलेको छु ।
तपाईले बाध्यताले भन्नुभएको हो की ?
मलाई बाध्यता छैन । म त लुम्बीनी क्षेत्रको मान्छे हु । त्यसैले म युद्ध होईन बुद्ध र शान्तीको कुरा गर्छु । नेपाल त अहिले सार्क र बिमिष्टेकको अध्यक्ष पनि छ ।
तर नेपालले भन्न सकेन नी त्यो कुरा, भारत चिन तिमी बिशाल छौ । तिमी दुईटा मुलुक युद्धमा जादाँ हामीलाई घाटा हुन्छ त्यसकारण तिमीहरु यो बाटोबाट मिलाएर जाऊ ।
अलिकति लामो निबन्ध भनेकी भनेनन् । तर परराष्ट्र मन्त्रीले कुटनितिक क्षेत्रमा यो कुरा प्रसस्त आएको छ ।
अब त्यो कसरी भन्दाखेरी सुनिने हो ? भन्ने कुरा तपाईहरुको सञ्चार माध्याममा दिपकुमारले ।
राजदुतको रुपमा भन्नुपर्छ होला । कृष्णबहादुर महराले सार्बजनिक रुपमा सञ्चारमाध्यामले सुन्ने गरी भन्नुपर्छ होला । प्रधानमन्त्रीले पनि यसैगरी भन्नुपर्छ होला ।
तपाईहरुले पोजटिभ कुराहरुलाई पोजेटिभली लिनु पर्छ । हामीले पटक पटक भनेका पनि छौँ ।
खासगरी नेपालले सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको रुपमा सार्क सम्मेलन गर्नु नेपालको दायीत्व हो । पाकिस्तानमा हुने सार्क सम्मेलन भारतकै कारण रोकिएको छ। नेपालले गर्न सकेन यो असक्षमता र असफलता त नेपाललाई दोष लाग्छ । यसमा नबोल्ने भारतसंग हामी ?
बोलेका छौ सार्कको महासचिबको नियुक्ती भयो । हामीले सार्क चार्टहरु यस्तो बनायौँ कि क्ुनैपनि राष्ट्रले राष्ट्रसंघको भिटो जस्तो छ । एउटाको असहमति हुनासाथ सम्भब हुदैन् । त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अलिकति वातावरण अनुकुल बनाएर गर्ने भन्ने छ ।
पाकिस्तानमा हुन्छ त सार्क सम्मेलन ?
हाम्रो लामो एक्सरसाईजबाट जन्मेको सार्कलाई अबसान गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । समय परिबर्तनशिल छ । समय आउदैछ । त्यसलाई नेपालले प्रयोग गर्ने बारे आफ्नो कुटनीतिक प्रयास गरीरहेको छ । त्यसमा पनि हामी सकरात्मक बनाउदै छौ । गर्दै गरेन भन्ने कुरा पटक्कै होईन् गरीराछौ । परिणाम मज्जाले आउँछ ।
हाम्रो लामो एक्सरसाईजबाट जन्मेको सार्कलाई अबसान गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । समय परिबर्तनशिल छ । समय आउदैछ ।
तपाईले लामो समय राजनीति गर्नुभयो । तथापि आज कुटनितिक मर्यादामा हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय मुलुक, राजनीति र दलहरु अगाडि जसरी बढिरहेका छन् । तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ ?
संबिधान सभाले संबिधान बनाएर कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि बढेपछि आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ । त्यसमा अरुलाई दोषारोपण गर्ने कुरा बन्द गर्नुपर्छ । चुनाबको बेलासम्म त नेताहरुलाई ग्रेसपिरीयड दिन्छु तर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री भैसकेपछि गैरजिम्मेवार बन्न पाईदैन् । हामीले भारतमा हे¥यौ भने कुनैपनि पार्टिको नेता नेपालमा आउछ भने उसले परराष्ट सचिबलाई वा राजदूतलाई सुचना गर्छ । यसरी आए, यो मान्छेलाई भेटे, यस्तो कुरा भयो भन्छ ।
के तपाईलाई सुचना दिदैनन् ?हाम्रा नेता प्रधानमन्त्री, पुर्वपधादिकारीहरु भारतमा जाँदा ?
म त राजनैतिक र सामाजिक मान्छे भा भएर केहि न आफ्नै किसिमको ब्यवस्थापन गर्छु । सुधाररात्मक प्रक्रियामा जाने बारेमा सोच्नुपर्छ । सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति बारे र राष्ट्रको बिकासको लागि एउटा एजेण्डा बनाउँछ ।
तपाई हरेक किसिमको समाधान या उत्तर चाँहि कुटनितिक भाषामा दिईहरनु भाछ । राजनितिज्ञ दिपकुमार छोडिएर कुटनितिज्ञ दिपकुमार मात्र बाँकि रहदैछ कि भन्ने आशंका बढ्यो
हैन् । मैले पदमा रहुञ्जेल मेरो पदको मर्यादालाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा मेरो हो ।
मैले पदमा रहुञ्जेल मेरो पदको मर्यादालाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा मेरो हो ।
यद्यपि तपाईको राजनितिक सोच, बिचार र आँकलन कहाँ छुट्छ र भन्या, तपाई भन्न चाहनुहुन्न की भन्ने मात्र हो ।
मैले जीवनको ४७–४८ बर्ष राजनीतिमा निरन्तर बिताए, झण्डै दुई बर्षदेखि म अर्को मर्यादामा छु । मलाई कपिलबस्तुका जनताले यहाँसम्म पु¥याए । मैले आदणीय जनताको भावना सरकार, नेताहरुको हामी संयोगले कुनै पदमा रहने हो । नमरुञ्जेलसम्म त हाम्रो जिम्मेवारी देश प्रति राष्टप्रति नै हुनुपर्दछ ।
दिपकुमार कुनै दिन फेरी नेपालको सक्रिय राजनीतीमा आउछ कि आउदैन् ?
जहाँ बसेपनि हामीले सेवा गर्ने हो ।
तपाई राजनितिमा फर्कने सम्भावना छ ?
मैले समयलाई पर्खेको छु । त्यो अप्सन त जहिले पनि बाकी नै छ नि । आबश्यकता अनुसार साथीहरुको भावना अनुसार आउनुपर्ने हो भने राजीनामा स्वीकृत गराएर आउँछु ।
पत्रकार छवि पुरीकाे धनराज गुरुङलाई प्रश्नः के कांग्रेस भ्रष्टाचारकाे पक्षमा हाे ?
व्यवसायीले भने, दसैँका लागि नयाँ गाडी थप्दैनौं (अडियाे सहित)
विकासका योजना बनाउँदा केहि व्यक्ति अत्तालिएः एमाले अध्यक्ष ओली
एकै स्थानमा दुई पार्टीको सभा हुनेभएपछि नुवाकोटमा निषेधित क्षेत्र घोषणा
तीन सीडीओसहित ६ कर्मचारी सरुवामा आयोगले सहमति दिएन
पहिलो चरणमा निर्वाचनका लागि विहिबार मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै
निर्वाचन हुने जिल्लामा प्रचार प्रसारका सबै कार्य बन्द गर्न आयोगको आग्रह
पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लामा दलहरु आज अन्तिम सभा गर्दै, प्रधानमन्त्री देउवा रोल्पा जादैँ
नेपाल–भारत सिमावर्ती क्षेत्रका नाका ७२ घन्टा बन्द हुँदै
निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा - मतदान केन्द्रमा कर्मचारी र निर्वाचन सामग्री पुग्दै
काठमाडाैं, २५ कात्तिक–नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेद्वार दीपकुमार उपाध्यायले आफ्नो उम्मेद्वारी मर्यादित प्रतिष्पर्धाका लागि भएको…
काठमाडौ । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुगेको छ । लामो समयको जनताको ब्यग्र प्रतीक्षापछि जारी…
© Copyright 2017 | Nepalbani Radio Network. All rights reserved.